तारागाउँ रिजेन्सीका लगानीकर्ताका लागि १२.६३१ प्रतिशत नगद लाभांश | गृहपृष्ठ
Home लगानी तारागाउँ रिजेन्सीका लगानीकर्ताका लागि १२.६३१ प्रतिशत नगद लाभांश
on: June 07, 2019 लगानी
जेठ २४, काठमाडौं(अस) । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको शेयरधनीहरुका लागि गत वर्षको मुनाफाबाट १२ दशमलव ६३१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने बाटो खुला भएको छ । कम्पनीले प्रस्तावित उक्त नगद लाभांश शुक्रबार २२ औं वार्षिक साधारण सभा मार्फत पारित गराएको हो ।
गत वर्ष ७ दशमलव ३७ प्रतिशत लाभांश दिएको कम्पनीले यस वर्ष उक्त रेसियोलाई बढाएको छ । लगानीकर्ताहरुले ३० वर्षको लगानीको प्रतिफल यतिले प्रयाप्त नभएको भन्दै आगामी वर्ष २० देखि २५ प्रतिशतको रेसियोमा वितरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
होटल्सको जग्गा सम्बन्धी विवादका कारण लगानीकर्ताहरु अन्योलमा रहेकाले लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने किसिमले काम गर्न समेत लगानीकर्ताहरुले सुझाब दिएका छन् । साथै, पर्यटन वर्ष नजिकिदैं गर्दा होटल्सको नाफालाई उच्च बृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने रणनीतिमा ध्यान दिन पनि लगानीकर्ताहरुको सुझाव दिएका छन् ।
केहि समय अघि कम्पनीको नाममा रहेको १५० रोपनी जग्गा र ४९ वर्षको लागि लिजमा लिएको १४८ रोपनी जग्गा कानुन विपरित भई फिर्ता हुनुपर्ने, शेयर अनुपातमा विभेद भएको, सास्कृतिक भिलेज हालसम्म नबनाएको, सञ्चालक समितिमा तारागाउँ विकास समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व संचालकको संख्या घटाएको, कम्पनीको प्रतिफल लगायत अन्य विषयमा कम्पनी विवादित बन्न पुगेको थियो । यस विषयलाई प्रष्ट्याउँदै कम्पनीले सत्य तथ्य विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
यस विवादका विषयमा सोही बमोजिम जानकारी होस भन्ने उदेश्यले आवश्यक कागजात, प्रमाण तथा प्रस्तावित योजना सहित प्रधानमन्त्रि, अर्थमन्त्रि, परराष्ट्रमन्त्रि लगायतका सरोकारवालहरु समक्ष लिखित प्रतिवेदन पेश गरी आवश्यक कारवाही अगाडी बढाइएको अध्यक्ष राधेश्याम सराफले जानकारी दिए । उनले यस विषयमा लगानीकर्तालाई अन्योलमा नपर्न समेत आग्रह गरे । उनले आम लगानीकर्ताको सुझाबलाई ध्यानमा राख्दै आगामी वर्ष यस वर्षभन्दा पनि बढी लाभांश दिन कम्पनी लागि पर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
होटलले चालू आर्थिक वर्षमा कम्पनी परिसरमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सुविधायुक्त कार्यक्रम सेन्टर निर्माण गर्ने योजना रहेको बताएको छ । सो अवसरमा यस परियोजनाको लागि नक्सा तथा लागत विवरण तयार भइसके पनि हालसम्म स्वीकृति प्राप्त नभएकाले उक्त योजना अधुरो रहेको जानकारी दिइयो । उक्त कम्पनीले यस आर्थिक वर्षको चैत १७ गतेसम्म बोनस र कर अघिको खुद नाफा रू. ३५ करोड ६५ लाख ७६ हजार रहेको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा यो नाफा रू. २७ करोड ५४ लाख ५ हजार रहेको थियो ।
गत वर्षभन्दा यो वर्ष कम्पनीको खुद नाफा बढेको छ । गत वर्ष रू. ९१ करोड ५७ लाख ६८ हजार होटल्स सञ्चालनबाट आम्दानी गरेको उक्त कम्पनीले यो वर्ष रू. १ अर्ब ४ करोड ४८ लाख ३२ हजार आम्दानी गर्न सफल भएको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख ५४ हजार रहेको छ भने जगेडा कोषमा रू. ७७ करोड ७७ लाख ७९ हजार रहेको छ ।
कम्पनीको दोस्रो बजारमा बिहीवार अन्तिम शेयरमूल्य रू. ३२७ कायम भएको छ । यस दिन अघिल्लो कारोबारभन्दा पाँच अंकले मूल्य बृद्धि भएको हो । पछिल्लो समय कम्पनीको शेयरमूल्यमा पनि केहि सुधार देखिएको छ भने कारोबार पनि बढेको अवस्था छ । बिहीवार कम्पनीको ९३ हजार ५४९ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सका शेयरधनीलाई नगद लाभांश बैंक खातामा